तपाइँको प्रति क्लिक भुक्तानी बढाउने सुझावहरूको एक पूर्ण सेट विज्ञापन ROI | Martech Zone
तपाइँको प्रति क्लिक भुक्तानी विज्ञापन ROI बढाउन सुझावहरूको पूर्ण सेट
बुधबार, डिसेम्बर 23, 2015 बुधबार, डिसेम्बर 23, 2015 Douglas Karr
जबकि यो डाटाडियाबाट इन्फोग्राफिक राज्यहरु सानो व्यवसाय को लागी, म इमान्दार हुनेछु कि हामी केही ईन्टरप्राइज र ठूला व्यवसायहरूसँग काम गर्छौं जसले यी धेरै सुझावहरूको फाइदा लिदैनन्! यो सुझावहरूको सब भन्दा पूर्ण सूची हुन सक्छ जुन यो आउँदछ कि जब गुगलमा प्रति विज्ञापन प्रति क्लिक भुक्तानी अधिक प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आउँदछ।
तपाईंको उद्योग जस्तोसुकै भए पनि, PPC व्यवस्थापनको लागि जीवन सजिलो बनाउनको लागि तपाईंले रोजगार गर्न सक्ने रणनीतिहरू उस्तै रहन सक्दछन्। यो इन्फोग्राफिक (डाटाबेडियलबाट तपाइँसँग, प्रेमको साथ) भुक्तान-प्रति-क्लिक सफलताको लागि conside conside विचार विच्छेद गर्दछ। Small 53 चरणहरू सानो व्यवसायको लागि अन्तिम PPC सफलताको लागि
प्रति क्लिक सुझावहरू भुक्तान गर्नुहोस्
कीवर्ड मिलानहरू - समयको साथ व्यापक र विशिष्ट खोजी सर्तहरू मिलाउनुहोस्।
विज्ञापन - बिभिन्न खोज क्वेरी र विज्ञापन संयोजनहरूको प्रयास गर्नुहोस्।
प्रतियोगिता - तपाईका प्रतिस्पर्धीहरू के मूल्य र मेसेजिaging प्रयोग गर्दैछ?
विज्ञापन विस्तारहरू - एक्सटेन्सनले अधिक स engage्लग्नता ड्राइभ गर्दछ र थप पैसा खर्च हुँदैन।
लामो पुच्छल कुञ्जी शब्दहरू - अक्सर कम लागत, अत्यधिक प्रासंगिक हो, र ठूलो रूपान्तरण गर्न को लागी।
गतिशील कुञ्जी शब्दहरू - स्वचालित रूपमा विज्ञापनमा तपाइँको कुञ्जी शब्द परिवर्तन गर्नुहोस् प्रासंगिकता र रूपान्तरण दर बढाउन सक्दछ।
क्लिकहरू खेर नगर्नुहोस् - असम्बन्धित संयोजनहरू हटाउन नकारात्मक कुञ्जीशब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ताहरूले प्रासंगिक फेला पार्दैन।
परीक्षण - डाटा अवलोकन गर्नुहोस्, चिमटीले काम गर्दैन र के गर्छ परिष्कृत गर्दछ।
सम्मिश्रता - तपाइँको laungage र टोन तपाइँको ब्रान्ड र सामग्री मिल्छ सुनिश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंको खोज र वेब एनालिटिक्स बुझ्नुहोस्
बहु-च्यानल - खोजी खोजी, प्रदर्शन, शपिंग, मोबाइल र भिडियो च्यानलहरू।
सामान्य - सामान्य खोज सर्तहरू वेवास्ता गर्नुहोस् जुन तपाईंको लागत र ट्राफिक बढाउन सक्दछ, तर रूपान्तरणमा नेतृत्व गर्दैन।
स्थान - यदि तपाईं एक स्थानीय वा बहु स्थानीय व्यापारहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ, सेटअप स्थान लक्ष्यीकरण।
जनसांख्यिकी - उमेर, लि gender्ग र अन्य सुविधाहरू अनुसार तपाईंको दर्शकहरूलाई लक्षित गर्नुहोस्।
उत्तम अभ्यासहरू - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको विज्ञापन दिशानिर्देशहरूसँग मिल्दो छ।
तथ्याङ्क - तपाईको रणनीतिको फाइन-ट्यून गर्न जति सक्दो डेटा लिनुहोस्।
फाराम - फारमहरू छोटो र मीठो राख्नुहोस्।
विश्लेषण गर्नुहोस् - अवसरहरूको पहिचान गर्न तपाईंको डाटा विश्लेषण गर्नुहोस्।
प्रासंगिक विज्ञापन, प्रदर्शन विज्ञापन
रीमार्केट - teHeY पछि तपाईंको साइट र बायाँ प्रयोग गरिएको भ्रमणकर्ताहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्।
उपकरण - भिन्नता पहिचान गर्न मोबाइल, डेस्कटप वा दुबैमा लक्ष्यीकरण प्रयास गर्नुहोस्।
कल गर्न क्लिक गर्नुहोस् - मोबाइल विज्ञापनमा एक विधि प्रस्ताव गर्नुहोस् सीधे विज्ञापनबाट कल गर्नका लागि।
क्लिक गर्नुहोस् - तपाइँको छविहरू स्पष्ट रूपमा क्लिक योग्य बनाउनुहोस्।
विक्रेता रेटिंग्स र समीक्षा - उच्च ट्रस्टको लागि रेटिंग्स र समीक्षा समावेश गर्नुहोस्।
URL - तपाईंको लिंक स्लगहरूमा कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्नुहोस्।
ग्राफिक्स - प्रासंगिक ग्राफिक्स को उपयोग गर्नुहोस्।
गति - पृष्ठ गति बढाउँदा तपाइँको विज्ञापन गुणवत्ता स्कोर सुधार गर्दछ।
उत्तरदायी - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइट मोबाइल वा डेस्कटप अवलोकनको लागि उत्तरदायी छ।
सदस्यता - इच्छुक आगन्तुकहरु संग व्यस्त राख्न एक न्यूजलेटर सदस्यता जोड्नुहोस्।
अनुकूलन - रूपान्तरण गर्न आवश्यक क्लिकहरूको संख्या कम गर्नुहोस्।
प्रशंसापत्र - विश्वसनीयताको लागि तपाईंको साइटमा प्रशंसापत्र प्रदर्शन गर्नुहोस्।
त्यो केवल केही अरू महत्त्वपूर्ण सुझावहरू हो, सम्पूर्ण इन्फोग्राफिक यहाँ छ:
टैग: AdWordsएडवर्ड्स एक्सटेन्सनहरूविश्लेषणफनेल अनुकूलन क्लिक गर्नुहोस्कल गर्न क्लिक गर्नुहोस्डाटाडीयलजनसांख्यिकीडेस्कटप अवतरण पृष्ठप्रदर्शन विज्ञापनगतिशील कुञ्जी शब्दहरूफारम अप्टिमाइजेसनसामान्य कुञ्जी शब्दहरूभौगोलिक लक्ष्यीकरणgoogle adwordsGoogle विश्लेषणइनबाउन्डअवतरण पृष्ठ अनुकूलनस्थान लक्ष्यीकरणलामो पुच्छर कुञ्जी शव्दहरूमोबाइल अवतरण पृष्ठमोबाइल पीपीसीबहु-च्यानलनकारात्मक कुञ्जी शब्दहरूपृष्ठ गतिसशुल्क क्लिकभुक्तान गरिएको खोजीभुक्तान गरिएको खोज परीक्षणप्रति क्लिक भुक्तानी गर्नुहोस्पीपीसीppc विज्ञापनहरूppc विश्लेषणppc मोबाइलppc टेस्टिंगबजारीकरणउत्तरदायीसमीक्षाविक्रेता समीक्षाप्रशंसापत्र
Stat तथ्या्कहरू मोबाइल बिक्री उपकरणहरू नाटकीय रूपमा प्रदर्शन सुधार गर्दै छन्
ग्रुव: सहायता टोलीका लागि हेल्पडेस्क टिकट